Kuvaka kana Kutenga? Kugadzirisa Matambudziko Ebhizinesi Neiyo Chaiyo Software | Martech Zone
Dambudziko rebhizinesi kana chinangwa chekuita chiri kukushungurudza nguva pfupi yadarika? Mikana ndiyo mhinduro yaro hinges pane tekinoroji. Seizvo zvinoda nguva yako, bhajeti uye hukama hwebhizinesi zvinokwira, wako wega mukana wekugara pamberi pevakwikwidzi pasina kurasikirwa nepfungwa dzako kuri kuburikidza kushandisa michina.
Shanduko mune yevatengi maitiro inoda otomatiki
Iwe unotoziva otomatiki ndeye isina-brainer maererano nehunyanzvi: mashoma zvikanganiso, mutengo, kunonoka, uye mabasa emawoko. Sezvakakosha, ndizvo izvo vatengi vava kutarisira. Yedu tsika yekudyidzana yedhijitari, yakashatiswa neanofarira epaFacebook, Google, Netflix neAmazon, zvinoreva kuti vatengi ikozvino vanoshuvira iwo mwero wakafanana wekuita, kukurumidza uye kugutsikana kwechinguva, vatengesi vanopa mubayiro vanopa iwo marudzi ezviitiko, uye kusiya vatengesi vasina.
Iko kuchinja kwemaitiro hachisi chinhu chekutora zvishoma: Zvakaitika zveVatengi izvozvi zvinokanganisa kutenga zvisarudzo kupfuura mutengo, mutengo, mashandiro kana zvimwe hunhu, vakadaro vanotsvaga.
Kune mabhizinesi, izvi zvinoshandura kuva marwadzo ekukura asiwo mikana mikuru yekukunda vakwikwidzi: Vanoda kusvika vatatu pavane rep rep service service vanoti kudzora basa ravo ndiro dambudziko ravo guru (Kukunda Mutengi), Uye mabhizinesi anorasikirwa angangoita $ 11,000 pagore, pamushandi, nekuda kwekutaurirana kwekuparadzanisa pamwe nekubatana (Foni yangu).
Hazvishamise: Vashandi vanotaura kushandisa 50% yenguva yavo vachitsvaga zvinyorwa nemaoko, vachienzanisa maminetsi gumi nesere pagwaro (M-Mafaira). Iyo nhamba inokwira kusvika ku68.6% kana iwe ukawedzera ekutaurirana nekubatana mabasa (CIO Kunzwisisa).
Kunyange zviri nyore kuona mabhenefiti eotomation, kuishandisa haisi yakajeka-kutemwa. Unofanira kuvaka tsika mhinduro? Tenga chimwe chinhu pasherufu? Tweak mhinduro yakafanogadzirirwa? Izvo zvinogona kunge zvisina kujeka, zvakaoma sarudzo.
Kuvimbisa yako tech inivhesitimendi inobatsira
Iyo indecision, hemming uye hawing inouya nekusarudza tekinoroji chaiyo inodzikira pane izvi: Ndeipi mhinduro isingatambise nguva yangu nemadhora?
Taura zvakapusa, chinopatsanura purofiti yehunyanzvi hwekuita mari kubva kune varombo ndeiyi: Tekinoroji inobatsira inobatsira kugadzirisa bhizinesi chairo uye ruzivo rwevatengi, anotsanangura Inverse-Square.
Iwo matambudziko anosanganisira:
Kunonoka mukuendeswa kwebasa
Kushaikwa kwemunhu kana kukosha
Zvinyorwa zvemhando yepamusoro
Kunzwisisa maonero kubva pane chokwadi
Zvakawandisa hoops kusvetukira kuburikidza kune zvakapusa mabasa kana mhinduro
Yakarasika, inovhiringidza kana isingabatsire data, uye nezvimwe.
Ko zvakadii nezve inguva idzo tekinoroji chishandiso inodzosera kumashure? Iwe wakambovepo: Kukanganisa, kusakosha kana kusatarisika kunokonzera vashandi kuratidzira, kusiya chishandiso, uye kudzokera kunzira yekare yekuita zvinhu. Unoita sei kuti izvozvo zvisaitike?
Zvinoitika iwe unogona kufanotaura kuti ndeipi tekinoroji ichaguma isingashandiswe kana kutariswa semutoro nezviratidzo zviviri zvekutadza:
Sangano harina kutora nguva kuti rinzwisise dambudziko iro tekinoroji rakagadzirirwa kugadzirisa uye kugadziriswa kwedambudziko iri.
Vashandi havanzwisise mashandisiro emhinduro kugadzirisa basa ravo kana hupenyu hwevatengi.
Ruramisa iwo anotarisa uye iwe uchangobva wawedzera mikana yako yekubudirira.
3 Sarudzo + 3 Matanho
Sezvaunofunga nezvedambudziko ripi rauri kuyedza kugadzirisa, une sarudzo nhatu:
Gadzira tsika software (kana gadzirisa mhinduro iripo)
Tenga mhinduro isiri-pasherufu
Matanho matatu anofanirwa kudzora yako sarudzo:
Ongorora matambudziko aunoda kuti software igadzirise
Wongorora maitirwo aripo
Nzwisisa kukosha kwezvemari uye zviwanikwa
Ndeipi sarudzo yakanakira mamiriro ako?
Bob Baird, muvambi we Inverse-Square, Indianapolis-based custom software development firm, inoputsa zvidzidzo zvaakadzidza kubva pakubatsira masangano kunongedza yavo yakanakisa software mhinduro:
Vashandi vako vanoshandisa yakanaka chunk yenguva yavo manyore kupinda data.
Bhizinesi rako rine zvido zvehunyanzvi.
Iwe une maviri kana anopfuura masisitimu anokwana zvaunoda, asi iwe ungade kuabatanidza.
Tsika software ichakupa mukana wekukwikwidza.
Iwe hausi kuda kugadzirisa mashandiro kuti uenzane nesoftware kugona.
Zvido zvako zvakajairika uye mhinduro dzave kutowanikwa.
Iwe uri kuda kugadzirisa bhizinesi mashandiro kuti aenzanise software kugona.
Yako bhajeti yemwedzi iri pasi pe $ 1,500 ye software.
Unofanirwa kushandisa software nyowani ipapo ipapo.
Zvikonzero zvekusaita chero chinhu
Vashandi pari zvino vanopedza shoma kana kusava nenguva pane emanyorerwo kana maviri maitiro.
Iwe hauna kuronga kukura bhizinesi rako mumakore mashoma anotevera.
Zvikanganiso, kunonoka, kusanzwisisika kana mhando dzemasipi hazvipo mubhizinesi rako.
Maitiro azvino, kutendeuka uye mashandiro emitengo akagadziridzwa kune rako bhizinesi izvozvi uye mune ramangwana.
Kuzembera Toward Customization?
Bob anocherekedza mashoma ekufunga nezvetsika software kuvandudza:
Usatanga nerondedzero yezvinhu. Tarisa pakunzwisisa matambudziko aunoda kugadzirisa kutanga. Kusiyana nemabara emapoinzi kumashure kwesoftware kurongedza, yako yekutanga pfungwa yezvakakwana dhizaini inogona kunge isina kukanganisa.
Kugadziridza hakufanirwe kuve kwese-kana-chinhu. Kana iwe uchida zvinhu zvemhinduro iripo asi uchida kugadzirisa zvimwe zvacho, ziva kuti mazhinji pre-akaiswa software anogona kuchinjiswa kuburikidza nemaAPIs.
Kuvaka software kunoda mutengo wepamberi. Haisi iyo yepamusoro-mutengo; iwe unongobhadhara kumberi kuti uve yako pachinzvimbo chekupa marezinesi.
Tsika software inoda kumberi kuronga. Hapana chinhu chitsva apa, asi zvakakodzera kuyeuka kumberi kuronga kunorova heck kunze kwekudzosera kumashure matambudziko apo software yacho isingaite sezvaitarisirwa uye vashandi vari kuipandukira.
Hire kana Outsource Yako Software Kuvandudza?
Iyo software yekuvandudza indasitiri ine hunyanzvi, uye kuunganidza bhizinesi-rakagadzirira webhu app rinowanzoda matatu akasiyana hunyanzvi seti. Yako yekutanga (uye pamwe yakakura kwazvo) kufunga, ipapo, imari: Unogona here kubhadhara vese aya mazvikokota?
Nezve mamwe maonero, funga kuti avhareji mubhadharo wejunior .NET mushambadzi, kusanganisira mabhenefiti, iri $ 80,000 / gore, uye iwe unoda vamwe vaviri nyanzvi kuti vatore timu yako. Nekupesana, kuburitsa kunze kweprojekiti yako kune yakazara-vashandi-software yekuvandudza femu ingakutorere iwe ingangoita $ 120 / awa, inogoverana Bob.
Iyo crux yenyaya ndeiyi, sarudzo yako kuvaka kana kutenga ichaita rako bhizinesi rakasarudzika uye rinodikanwa kune vatengi, kana kukumanikidza iwe kuti uchinje bhizinesi rako kuti riwane software?
Bob Baird, muvambi we Inverse-Square
Tags: bob bairdkuvaka kana kutengainverse squaresoftware development